Môsikao - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Moskova)
Isam-ponina 10 770 000 mponina
Tanànan-dehibe 14 744 150
Ben'ny tanàna Sergey Sobyanin
Faritany Distrika Afovoany (Rosia)
I Môsikao na Môsikoa (amin' ny fiteny rosiana Москва, / Moskva, IPA: /mɐˈskva/) dia renivohitra ny Federasionan'i Rosia ary tanàna ngeza indrindra any Eorôpa.
Eo amin'ny renirano Moskova ny misy an'i Môsikao, mitovy anarana amin'ilay renirano ilay tanàna amin'ny fiteny rosy. Eo amin'ny distrika ampivoany, amin'ny lafy eoropeaninan'i Rosia ny misy an'i Môsikao.
Môsikao dia ny tanàna ngeza indrindra any Eoropa amin'ny isam-poniny mahatratra 10,22 tapitrisa mahery ao an-drenivohitra ary 14,74 tapitrisa raha isaina ny ambanivohitra. Renivohitra ara-toe-karena, ara-politika sy ara-pahaizan'i Rosia ny Môsikao, ary 8,9% ny olona any Rosia miaina any Môsikao.
Betsaka ny fandraisana anjaran'ny tanànan'i Môsikao ao amin'ny tantaran'ny Rosia: Renivohitra ny Grand-Duché-n'i Môsikao izy, ary lasa renivohitra ny Empira Rosiana; nafindran'i Pierre le Grand (Petera Ilaibe) tany Saint-Petersbourg ny renivohitra; very lanja ny tanànan'i Môsikao hatramin'ny taona 1918; Lasa renivohitry ny Firaisana Sôvietika i Môsikao tamin'ny taona 1918. Fantatra amin'ny fanam-pananana ara-maritrano i Môsikao: ao ny Kremlin miaraka amin'ny fehivolany, ny katedraly St Basile eo amin'ny Kianja Mena, ny katedralin'i Kristy Mamonjy sy ny Sera Stalinianina Fito. Any Môsikao ny foiben'ny Patriarkan'ny Fiangonana Ôrtôdôksa Rosiana an'ny monasteran'i Danilov. Eo amin'ny toeran'ny Kremlin sy ny Kianja Mena ny ampovoan'i Môsikao.
Antsoin'ny mponina Rosy "Матушка Москва" (« Matuška Môsikao ») (Reny Môsikao) ny tananan'i Môsikao.
Foiben'ny oniversite maromaro ny tanàna, tany no nisy ny Kilalao Olimpika tamin'ny 1980.
Ankehitriny, manan-danja be ny tananan'i Môskao ao amin'ny toe-karenan'i Rosia, mahavokatra ny 25%n-ny PIB n'ny federasiona izy. Lasa « Géante Capitaliste » i Môsikao teo aorian'ny andro komonista ary efa manan-danja i Môsikao eo amin'ny toekarena eoropeanina. Ny faribohitr'i «Môsikao-City» ny evan'ny fiovan'ny Môsikao. Fa tsy nandeha tsy nisy olana io fiovàna io. Ny elanelana ara-toe-karenan'ny olona dia lasa nihabetsaka avy hatrany: Misy silaka manan-karena ary miha-manan-karena, ary misy ny mahantra miahamahantra.
1 Ny mponina
2 Ny tanàna
2.1 Fivoarana ho avy
3 Ny toe-tany
Araka ny fanisam-bahoaka natao tamin'ny 2008, 10 382 754 ny isan'ny olona tany Môskao. Ny faminavinana natao ho an'ny taona 2007 dia mampiseho fa efa nihoatra ny 12 tapitrisa ny isan'ny mponina. Kanefa io isa io tsy manisa ny olona tsy manana alànana mipetraka sy ny gastarbeiter miaina any an-tanàna. Avy any amin'ny Kaokazy (Azerbaijana, Armenia, Jeôrjia) sy Azia Afovoany (Kazakstana, Ozbekistana, Tajikistana) ny ankabeazan'ny olona miaina any. Misy ihany koa ny mponina avy amin'ny firenen'ny Firaisana Sôvietika taloha.
I Môsikao dia anisan'ny tanàna manana fitomboana tsy mihemotra any Rosia: tamin'ny 2006, +0,22 % ny fitomboany. Ny taham-pahaterahana tamin'ny 2006 dia 9,2 % ary ny taham-pahafatesana dia 12 %. Kely ny elanelan'ny taham-pahatrerahana sy ny taham-pahafatesana any Môsikao noho ny any an-tsisan'i Rosia: -0,28 % any Môsikao ary -0,48 % eran'ny firenena. Ny antony mampiakatra ny isan'ny mponin'ilay tanàna dia izao: betsaka ny olona avy any amin'ny tanàna hafa. Ary ny pôlitikan'ny governemanta koa no mampiakatra azy io. Efa nidina betsaka mihitsy ny fahafatesana ary niakatra fito taona ny salan'ny halavam-piainana any Môsikao.
Fivoarana ho avyModifier
Ny faritanànan'i Môsikao City dia ho toeram-barotr'i Môsikao. Any ivelan'i Môsikao ara-tantara, any amin'ny distrikan'i Presnensky, ny hisy azy. Mivoatra be ny toeran'i Môsikao City. Neritreretina tamin'ny 1992 ilay tetikasa ary ny tanjony dia hampivoatra toerana ara-toe-karena sy toerana ipetrahana. Ny fivelaran'ilay faritanàna dia misy 1 km2. Io faritra io ihany no voasafidy ho an'ilay tetikasa satria orinasa sy ozinina efa taloha daholo ny teo.
Ny Federation Tower no ho trano mijoalajoala avo indrindra any Eorôpa. Ho tapitra amin'ny faran'ny 2010 ny fanamboarana. Mety ho resin'ny Russia Tower ny Federation Tower amin'ny 2011, 650 m ny haavony (nijanona tamin'ny Aprily 2009 ny fanamboarana ny Russia Tower noho ny fisian'ny krizy ara-teo-karena). Ho betsaka ny trano hijoalajoala sy ny toeram-barotra ary ny centre aquatique ao. Ho ao amin'ny faritanàna ao koa no hisy ny trano fandrindrana an'i Môsikao, sy ny trano avo ipetrahana.
sary mampiseho ny hafanana sy ny orana any Môsikao
Ara-kontinenta ny toetr'andro any Môsikao, ny dikan'izany dia betsaka ny elanelan'ny hafanana anelanelan'ny fahavaratra sy ny ririnina. Mangatsiaka ny ririnina ary mafana ny fahavaratra. Fohy ny lohataona sy ny fararano any Môsikao. Amin'ny andro fahavaratra, manakaiky ny 25 °C ny hafanana ary midina ao amban'ny -10 °C izy amin'ny andro ririnina. Nahatratra 36,7 °C ny hafanan'ny andro nafana indrindra tamin'ny volana Aogositra 1936, ary -42,2 °C ny hatsiaka tany tamin'ny Janoary 1940. Mitovitovy ny habetsaky ny orana mandavan-taona, fa somary betsabetsaka izy amin'ny fahavaratra noho ny ririnina. Misy oram-panala eo amin'ny tanin'i Môsikao amin'ny antsasaky ny volana Novambra hatramin'ny faran'ny Martsa. Mety mahatratra 78 santimetatra ny haabon'ny orampanala nilatsaka amin'ny andro ririnina.
Hatramin'ny 2006, anisan'ny tanàna lafo fiainana indrindra eto an-tany ho an'ireo vahiny i Môsikao. Ny havitsian'ny trano, ny fihakaran'ny vidin'ny Rouble sy ny fisian'ny milionera rosy vaovao no mety manazava ny fiakaran'ny vidin'ny trano any Môsikao. Sady atao lafo ny vidiny ho an'ny vahiny.
Matetika mipetraka anaty trano efitra kely ny olona mipetraka any, nomena tsy andoavam-bola ireny trano ireny tamin'ny taonan'ny Sovietika na tamin'ny taona 1990, miampy amin'io koa ny hamoran'ny service publics sy ny hetra 13 %, mampidina ny vidin'ny fiainana any an-drenivohitra izany politika izany.
Tamin'ny taona sovietika, mandeha arakaraky ny m²/olona ny hofantrano. Mety mahazo bonus ny olo-malaza. Voafetra ny harena tamin'ny andron'ny sosialista.
↑ ((fr)) http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=17339907 Archived Janoary 12, 2009 at the Wayback Machine
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Môsikao&oldid=1038153"
Dernière modification le 27 Septambra 2021, à 09:38
Voaova farany tamin'ny 27 Septambra 2021 amin'ny 09:38 ity pejy ity.